တရုတ် 3M-150M တယ်လီကွန်းတာဝါများ ထုတ်လုပ်ခြင်းနှင့် စက်ရုံ | XY မျှော်စင်
Monopole Tower နှင့် Lattice Type Tower နှိုင်းယှဉ်မှု
Tubular Steel Poles များ
ကျန်းမာရေး၊ ဘေးကင်းရေးနှင့် ပတ်ဝန်းကျင်
ဆက်သွယ်ရေးတာဝါသည် signal transmission tower သို့မဟုတ် signal tower ဟုခေါ်သော အချက်ပြထုတ်လွှင့်မှုမျှော်စင်အမျိုးအစားတစ်ခုမှ ပိုင်ဆိုင်ပါသည်။ ပင်မလုပ်ဆောင်ချက်သည် အချက်ပြထုတ်လွှင့်မှုကို ပံ့ပိုးပေးပြီး အချက်ပြထုတ်လွှင့်ခြင်း အင်တင်နာကို ပံ့ပိုးပေးသည်။ မိုဘိုင်း/unicom/traffic ဂြိုလ်တုတည်နေရာပြစနစ် (GPS) နှင့် အခြားဆက်သွယ်ရေးဌာနများကို အသုံးပြုသည်။ မီးသတ်လေ့ကျင့်ရေးမျှော်စင်။
ဆက်သွယ်ရေးတာဝါတိုင်အား တာဝါတိုင်ကိုယ်ထည်၊ ပလပ်ဖောင်း၊ လျှပ်စီးတံ၊ လှေကား၊ အင်တင်နာပံ့ပိုးမှုစသည်ဖြင့် သံမဏိအစိတ်အပိုင်းများဖြင့် ဖွဲ့စည်းထားပြီး ပူပြင်းသောသွပ်ရည်နှင့် သံချေးတက်ခြင်းတို့ကို ကုသပေးသည်။ မိုက်ခရိုဝေ့ဖ်၊ ultrashort wave နှင့် wireless network signals များ ထုတ်လွှင့်ခြင်းနှင့် ထုတ်လွှင့်ခြင်းအတွက် အဓိကအားဖြင့် အသုံးပြုပါသည်။
ကြိုးမဲ့ဆက်သွယ်ရေးစနစ်၏ ပုံမှန်လည်ပတ်မှုကို သေချာစေရန်အတွက် ဆက်သွယ်ရေးအင်တင်နာကို လိုချင်သောဆက်သွယ်ရေးအကျိုးသက်ရောက်မှုရရှိရန် ဝန်ဆောင်မှုအချင်းဝက်ကို တိုးမြှင့်ရန်အတွက် ယေဘုယျအားဖြင့် အမြင့်ဆုံးနေရာ၌ ထားရှိထားသည်။
ဆက်သွယ်ရေးအင်တင်နာတွင် အမြင့်ကိုတိုးမြှင့်ရန် ဆက်သွယ်ရေးတာဝါရှိရမည်၊ ထို့ကြောင့် ဆက်သွယ်ရေးတာဝါသည် ဆက်သွယ်ရေးကွန်ရက်စနစ်တွင် အရေးကြီးသောအခန်းကဏ္ဍမှ ပါဝင်ပါသည်။
အရပ်အမြင့် 10M-100M သို့မဟုတ် client ၏လိုအပ်ချက်အရ
ပုံသဏ္ဍာန် ပုံတူဂုံ သို့မဟုတ် ပုံသဏ္ဍာန်
ပစ္စည်း ပုံမှန်အားဖြင့် Q235B/A36၊Yeild Strength≥235MPa
ASTM572၊ GR65၊ GR50၊ SS400 မှ Hot Rolled coil အပြင်၊
မျက်နှာပြင်ကုသမှု ASTM123 အောက်တွင် ဖောက်သည်၏ လိုအပ်ချက်အရ ပူပြင်းသော-သွပ်ရည်စိမ်ထားသော သို့မဟုတ် အခြားစံနှုန်းတစ်ခုခု
အဆစ် စလစ်အဆစ်၊ အနားကွပ်ချိတ်ဆက်ထားသည်။
အပိုင်းအလိုက် အရှည် 13M အတွင်းမှာ တခါများခြင်း။
Welding Standard AWS(အမေရိကန်ဂဟေဆော်အဖွဲ့အစည်း)D 1.1
အထုပ်များ ပလပ်စတစ်စက္ကူဖြင့်ထုပ်ပိုးခြင်းသို့မဟုတ် client ၏လိုအပ်ချက်အရ
ဘဝကာလ 25 နှစ်ကျော်, ၎င်းသည်တပ်ဆင်ပတ်ဝန်းကျင်အရသိရသည်။
Guyed tower သည် ဆန်းသစ်သောသဏ္ဌာန်ရှိပြီး ၎င်း၏အကြီးမားဆုံးလက္ခဏာမှာ steel guy wire ကိုအသုံးပြု၍ ခိုင်ခံ့စေပါသည်။
Guyed tower သည် စျေးသက်သာပြီး လက်တွေ့ကျသော ဘုံဆက်သွယ်ရေးတာဝါတစ်ခုဖြစ်သည်။
များအတွက် အလွန်သင့်လျော်ပါသည်။ ပထဝီဝင် ကျယ်ပြန့်သော ဧရိယာများ။
Self supporting tower သည် အများအားဖြင့် 3leg 4leg tower ဖြစ်ပြီး ၎င်း၏ပစ္စည်းမှာ steel pipe သို့မဟုတ် angle steel ဖြစ်သည်။ ချိတ်ဆက်မှုအတွက်၊ tubular tower သည် flange ဖြင့်ချိတ်ဆက်ထားပြီး angle steel tower ကို nuts နှင့် bolts များဖြင့်ချိတ်ဆက်ထားသည်။
2. မြေယာအရင်းအမြစ်ကိုသိမ်းဆည်းပါ၊ အဆင်ပြေသောတည်နေရာ။
Single tube tower သည် လှပသောအသွင်အပြင်ဖြင့်9မှ 18 စတုရန်းမီတာအထိ ကျယ်ဝန်းကာ ကုန်ကျစရိတ်သက်သာပြီး ဆောက်လုပ်ရေးအများစုမှ လက်ခံကျင့်သုံးသည့် Single tube tower ဟုခေါ်သည်။ မျှော်စင်ကိုယ်ထည်သည် ပိုမိုကျိုးကြောင်းဆီလျော်သောအပိုင်းကို လက်ခံရရှိပြီး ခွန်အားမြင့်သော ဘော့ဖြင့် ချိတ်ဆက်ထားသည်။ ၎င်းတွင် တပ်ဆင်ရလွယ်ကူသော လက္ခဏာများ ရှိပြီး ရှုပ်ထွေးသော အကွက်မျိုးစုံကို လိုက်လျောညီထွေဖြစ်စေနိုင်သည်။
Camouflaged Tree Tower သည် မြင်ကွင်းဧရိယာ၊ ပန်းခြံနှင့် စတုရန်းစတုရန်းရှိ သစ်ပင်အစစ်များကြားတွင် အစစ်အမှန်ကဲ့သို့ အခြေတည်ထားသည့် Bionic သစ်ပင်မျှော်စင်၏ ရုပ်ပုံသဏ္ဍာန်ရုပ်ပြောင်းသစ်ပင်တစ်မျိုးလည်းဖြစ်သည်။
1. လက်ရာမြောက်သောဖွဲ့စည်းပုံ၊ လှပသောအသွင်အပြင်။
2. ခိုင်ခံ့သောဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ပုံဆိုင်ရာတည်ငြိမ်မှု, တာရှည်အလုပ်လုပ်ဘဝ။
3. သေးငယ်သောဧရိယာကိုဖုံးလွှမ်း, ကြီးစွာသောစီးပွားရေးအကျိုးသက်ရောက်မှု။
သွပ်ရည်စိမ်စံ- ISO: 1461-2002။
ခိုင်ခံ့မှု CuSo4 ဖြင့် တိုက်စားခြင်း။
ဇင့်အင်္ကျီကို တူဖြင့်ထု၍ မချွတ်ရ။ ၄ ကြိမ်
စက်ရုံတိုက်ရိုက်ရောင်းချမှု၊ တိုတောင်းသောအချိန်၊ အရည်အသွေးအာမခံချက်၊ သံမဏိမျှော်စင်ဒီဇိုင်း၊ ထုတ်လုပ်မှုနှင့် တင်ပို့မှုကို ၅ နှစ်ကြာအာရုံစိုက်ပါ။
ယခင်- 10KV-500KV ဂီယာတာဝါ
China Mobile Antenna Tower
Steel Tube Telecom Tower
Steel Tube Telecommunication Tower
Telecom Tower စက်ရုံ
Telecom Tower ထုတ်လုပ်သူ
Telecom Tubular Tower
Telecommunication Tower ပေးသွင်းသူများ
စက်ရုံခေါင်း: မဟုတ်ဘူး 528၊ အနောက်အပိုင်း၊ Liutai Avenue၊ Chengdu၊ တရုတ်နိုင်ငံ HDG စက်ရုံ-အမှတ် ၃၆၆၊ Tongxin Avenue၊ Chengdu၊ China
© မူပိုင်ခွင့် - 2019-2021- All Rights Reserved.